လွမ်းခြင်း ရဲ့ လွမ်းချင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » လွမ်းခြင်း ရဲ့ လွမ်းချင်း
လွမ်းခြင်း ရဲ့ လွမ်းချင်း
ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်နှောင်း က ရွာထဲဝင်တစ်ချက်၊ မဝင် တစ်ချက် နဲ့ နောက်ပိုင်း ရွာ့ကာလသားကြီး ကို ကျောက် တစ်ယောက် ရွာသူလေးနှင်း နဲ့ တူနှစ်ကိုယ်လက်တွဲ ရော
အရီးခင် တစ်ယောက် အသဲကွဲပြီး ရွာထဲက ပျောက်ရော မထင်လိုက်ကြပါနဲ့။
တကယ်တော့ သူရို့ သားဦး/သမီးဦး လေးရမှ ပြန်ဝင်လာ မလားလို့ ပါ။
အမှန်ကတော့ အရီး ပျောက်နေခြင်းအကြောင်းက ကလေးကျောင်းကြီး ပြောင်းတော့ သွားရတဲ့ ကျောင်းက မြို့ဟိုဘက် ဒီဘက် ခရီး ဝေးလွန်းသမို့ အိမ်ပြောင်းရပါတယ်။
ဝေးတာထက် ဖြတ်ရတာ မြို့လည်ကားကျပ်တာမှ တစ်ခါကဆို လမ်းပိတ်ပြီး ကားထဲမှာ ၂နာရီကြာပါတယ်။
ဒါနဲ့ ကျောင်းနားကို ပြောင်းရတာပါ။
ပြောင်းတဲ့ အိမ်ကအသစ်ဆောက်တဲ့ အိမ်ယာမို့ ပြောင်းပြောင်းချင်း ဖုန်းမရပါ။ အင်တာနက်မရပါ။
ဒီလို ရင်းဂလိပ်နိုင်ငံကြီး မှာ ဒီလို ဖြစ်တာ ဆန်းသွားသလား။
ကိုယ်တင်မဟုတ်။ အသစ်ဆောက်တဲ့ နေရာတိုင်းမှာ ဖြစ်နေကျ ပြသနာဖြစ်နေပါတယ်။
အဲလိုမရတာ တစ်လမဟုတ်၊ နှစ်လမဟုတ်။
တစ်ချို့ ဆို လေး၊ ငါးလ ကြာတယ်ပြောသမို့ ကိုယ်က တော်သေးဖြေရမလားပါဘဲ။
အလုပ်ကလဲ အရင်လို ကွန်ပျူတာ ကို တစ်ချိန်လုံး ကြည့်နေလို့ရတဲ့ ဘဝ မဟုတ်တော့။
အရေးထဲ အိမ် က ကွန်ပျူတာမှာ မြန်မာစာ ဘယ်လိုဖြစ်တယ်မသိ။ အားလုံး လေးထောင့်ချည်းဖြစ်နေ။
ဒါနဲ့ဘဲ အားလုံး နဲ့ရော လောကကြီး နဲ့ပါ အဆက်ပြတ်ရော။
ကြားမှာ အဆင်ပြေတာရှိ၊ အဆင်မပြေ စိတ်ပျက်စရာတွေလဲ ရှိ ပေါ့။
အဲဒီအချိန် ဘုရား ဟော မမြဲခြင်း တရား တွေ ကိုလဲ ပွါးပါတယ်။
ဟို လူကြီးရဲ့ “Stay Hungry. Stay Foolish” ကို လက်ကိုင်ထားပါတယ်။
ဒီ အရွယ်ကြီးရောက်ကာမှ အသားကျနေတဲ့ တစ်ခုကနေ ဘာမှမဆိုင်တဲ့ နောက်တစ်ခု ကို ပြောင်းဖို့ ကြိုးစားနေတာ ရူးနေလို့ပါဘဲ။
ဆာ တာကတော့ မပြောနဲ့။ ရွာထဲက ကိုယ့် ဖေးဘရိတ် ထမင်းဆိုင် ကိုတောင် လှည့်မကြည့် နိုင်တာ။
နောက် ရှိသေးတယ်၊ နောက်တစ်ယောက် ရဲ့ စကား။ အမြဲ နားထောင်ပါတယ်။
စာမေးပွဲ ဆိုတာ ဖြေရတာ များလာရင် ကျ တတ်တယ် ဆိုတာ သူ့ခမျာ မသိသွားဘူး။
ဒီလိုအကြောင်းတွေ နဲ့ ဘဲ အရီး တစ်ယောက်လဲ စကား သိပ်မပြောနိုင်တော့ ဘဲ ပြောချင်တာတွေ ရင်ထဲ ထားပြီး နေရတဲ့ ဘွ ဖြစ်သွားတာပါ။
ဒါတောင်မှ မပြီးသေးတဲ့ ပန်းချီကား တွေ ရှိနေသေးရဲ့။
ရွာထဲ အမာခံလုပ်ပြီးမှ ဘယ်လို ခွဲထွက်နိုင်ပါတော့မလဲ။
အင်တာနက် ပြတ်တုန်းက ရုပ်ရှင်တစ်ကား ကြည့်လိုက် မိတာ ကို ရွာထဲ ဝင်ပြီး ပြောချင်လိုက်တာ။
မင်းသားက Ashton Kutcher၊ “The Butterfly Effect” တဲ့။
မင်းသားက လက်ရှိမှာ ဖြစ်နေတာ ကို မလိုချင်ရင် အိမ်မက် လိုက်ချိန် မှာ ပြင်နေလိုက်တာ။
သဘောက တော့ အတိတ်ကြောင့် (အကြောင်း) ဖြစ်လာ တဲ့ လက်ရှိ အဖြစ်တွေ (အကျိုး) ကို ပြနေတာပါ။
ဒါပေမဲ့ ရုပ်ရှင်ထဲကျ မလိုချင်ရင် အတိတ်ကို ပြန်သွား ပြီး ပြန်ပြင်လိုက်တာ။
သိပ်တော့ အကောင်းကြီးမဟုတ်ပေမဲ့ ရွာထဲ မှာ ငြင်းလေ့ရှိတဲ့ အတိတ်ကံ ၊ ပစ္စုပန်ကံ အကြောင်းတွေကို သွားသတိရမိလို့။
နောက်ပြီး Amy Chua (Battle Hymn of the Tiger Mother) ရဲ့ စာအုပ် အသစ် ထပ်ထွက်လာတယ်။
ဒီတစ်ခါတော့ သူ့ ယောက်ျားနဲ့ တွဲရေးတာ။
သူကြီး တို့ အမေရိကား က လူတွေဖတ်ဖို့ကောင်းတယ်။
အဲဒီ အကြောင်းတွေ ကိုလဲ ဆွေးနွေးချင်တာ။
လောလောဆယ် ပြောချင်နေဆဲ သတင်း ကတော့ ဒီနှစ် ဥရောပသီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲ မှာ နိုင်သွားတဲ့ မုတ်ဆိတ်မွေးလေဒီ အကြောင်းဘဲ။
ဒီနေ့ အဖို့ တော့ လွမ်းခြင်း ရဲ့ လွမ်းချင်း ကို အဆုံးသတ်တော့မယ်။ :-))))
အဲလိုအတိတ်ကိုပြန်သွားပြီးအ ကြောင်းကိုပြန်ပြင် တဲ့ဇတ်ကားရှိတယ်
ကုလားကားပါ စိတ်ကူးရင် ဆန်ဆန် ရိုက်ထားတာပါ ။
ကြည့်လို ့တော့အရမ်းကောင်းတယ် ဒါမဲ့အတိတ်ကိုတော့မပြင် နိုင် ခဲ့ပါဘူး
တချို ့တဝက်ကိုပဲံပြင် နိုင် ခဲ့တာပါ လက် ရှိအပြင် မှာတော့ အ ကြောင်းပြင် လို ့မရတော့
ဘူး မ ကောင်းတဲ့အ ကြောင်းအသစ်တွေ ထပ် မဖြစ်အောင် ပဲ ဆင် ခြင် ရမှာပါ
ကမာ္ဘ့ ဖလား အမီ ပြန်လာတယ်ပဲ မှတ်ပါတယ်…။
ဟိဟိ… ကလိစရာ အသစ်တိုးဘီ…။
အခုတော့ ခရစ်စတယ်လိုင်းရယ်… မောင်ဂီရယ်… ကျွန်တော်ရယ်က မြန်မာပြည်မှာစုမိနေပြီ…
ထိုကာလအတွင်းမှာ ရေးစရာကုန်ကြမ်း အတွေးတွေ အတွေ့အကြုံ တွေ များစွာပိုင်ထားပြီထင့်။
အဲဒီ အမျိုးသမီး ကို မြင်ဘူးလိုက်တုန်းးက ဘာမှန်းးမသိ လိုက်ဘူးးး
ထပ် လွမ်းရအောင် မလုပ်နဲ့ဂျာ
အ မလေး အရီး ရဲ့
အ မ လေး အရီး ရဲ့——
သများ ထမင်းဆိုင်ဖွင့်တဲ့ နေ့တိုင်းလည်း အရီးကို သတိယတယ်။
ခုလေ သများမှာ စားဖိုမှူးအသစ်တွေရနေပြီ သိလားးး
လွမ်းလို့ ရွာထဲမှာပြောနေတုန်း “စာ” ထင်ပြတယ်ဆိုတော့…
သားဦးလေး ရှင်ပြုမှ စာပို့တာထက်စာရင် တော်သေးတာပေါ့ ‘…
စကားအတင်းစပ်… အရီးရဲ့မုတ်ဆိတ်နဲ့ ဖြတ်ဖောက်ချုပ်ကိုကြည့်ရတာ…
စိတ်ထဲမှာ ယားကျိကျိနဲ့… တယ် မနိပ်လှဘူး… အားဟိ
လွမ်းလိုက်တာအရီးရယ်။ အရီးအသံလေးကြားရဝမ်းသာလှပေါ့။ ကိုယ်ယောင်ပြပြီးရင်တော့ ပြန်ရတော့ဘူးနော်အရီး။ ဟိုဖက်စတစ်ကိုကျေးဇူးအကြီးကြီးတင်ရတော့မယ်ထင့်။ ရွာသူားဟောင်းတွေတော်တော်ပြန်မြင်လိုက်ရလို့ အဟိ
အနော် ဖိုးသကြားကလဲ ကြိုဆိုပါတယ်ဗျိုးးး
လူဟောင်းတွေ တဖွဲဖွဲ ပြန်ရောက်လာပြီး
ဇလုံတွေ ပန်းကန်တွေ ကျောက်ပြင်တွေ သနပ်ခါးတုံးတွေ တဝီဝီနဲ့
ရွာကြီး ပြန်စည်ကားလာတော့မှာ မြင်ယောင်မိသေးတော့ ….
လွမ်းချင်းကိုဖတ်ပြီး အလွမ်းတွေ ပြေသွားပြီ။
အရီးကို လွမ်းနေတာ.. မယုံရင် ရွာထဲကသူတွေကို မေးကြည့်…
အံ့ဘနန်း ဖြစ်လာရပါ့ …
နှလုံးရောဂါ အခံ ရှိခဲ့ရင်လေ ..
ဒီနေရာမှာတင် လဲလို့ သေသွားနိုင်ပါသလေ …
ဒို့များအရီးကို အံ့ဘနန်း ဝဲလ်ကမ်း သွားပါတယ် ခညာ …
ဒို့ အရီးပြန်လာ ပြီပေါ့။ တစ်ကယ်ပြောတာ ကိုအဒေါ်ကို အဒေါ်လို့ခေါ်ရတာထက် အရီးလို့ခေါ်ရတာ ပိုရင်းနှီးသလို ခံစားရတယ်။ အရာရာ အစဉ်ပြေ ပါစေ အရီးရေ။
တခုခုကို အပြင်းအထန် ချေပဖို့ လိုလာတိုင်း (အထူးသဖြင့် သဂျီးကို) မလတ်သာရှိရင်လို့ တမ်းတနေရတာ။
ဒီလိုမျိုး ဝေးနေပေမယ့် ရွာကို ချစ်နေစဲသူတွေ (ဆဲတာ မဟုတ်ဘူးနော်)ရှိလို့ ဒီရွာက နေပျော်တာ။
အရီးတွေ့ ရတော့ ကိုသစ်မင်းကိုလည်း သတိရ တယ် ဗျ .. ကိုပေ တို့ ပေါက်ဖော်တို့ လည်းသတိရမိပါတယ် ..
အဖိုးကြီး အဖွားကြီး ဖြစ်သွားတဲ့လူတွေ ရွာထဲပြန်မဝင်ကြတော့ဘူး။ စိတ်ရောလူရော လန်းနေဆဲ လူတွေသာ ရွာထဲမှာ ရှိနေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အရီးလည်း ပြန်နုပျိုသွားလို့သာ ရွာထဲပြန်ရောက်လာတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အရီးလတ်﻿﻿….﻿﻿ဆောတီးဘာ… အရီးခင်﻿﻿ကို သတိရသူ﻿﻿တွေထဲမှာ ကျ﻿﻿နော်﻿﻿လည်﻿﻿းပါသဗျာ။
ဒီရက်﻿﻿ပိုင်﻿﻿း တက်﻿﻿လာတဲ့ post ﻿﻿တွေ comment ﻿﻿တွေက ﻿﻿ကောင်﻿﻿းသဗျာ။
အစား﻿﻿ကောင်﻿﻿းစားရရင်﻿﻿ မိတ်﻿﻿﻿﻿ဆွေ﻿﻿တွေကို သတိရသလို post ﻿﻿ကောင်﻿﻿းဖတ်﻿﻿ရရင်﻿﻿ ရွာသူရွာသား အားလုံးကို သတိရတယ်﻿﻿။
ကျ﻿﻿နော်﻿﻿က ရွာပြင်﻿﻿ ဇနပုဒ်﻿﻿ကပဲ ﻿﻿ချောင်﻿﻿းကြည်﻿﻿့﻿﻿နေ﻿﻿ပေမယ်﻿﻿့ အားလုံးကို ချစ်﻿﻿ခင်﻿﻿﻿﻿လေးစားပါတယ်﻿﻿။
ကျွန်တော်တို့လည်း လွမ်းနေကြတာပါဗျာ။
ကျွန်တော်တို့က ပိုမှာပါ အစ်မ ရေ။
ကိုခင်လတ်ကြီး ပြန်ပေါ်တော်မူလာတော့ မတင်တော့ပါဘူး…ရေးထားတာက ရွာထဲပျောက်နေသူတွေကို
ရည်ရွယ်တာပါ..ခေါင်းစဉ်က“သားသား မုန်းသူများ ” တဲ့…အဲထဲ ခီများကို ဒီလိုတို့ထားတာ…
သားထက်ရွာဝင်နောက်ကျခဲ့ပေမဲ့ စာရေးကောင်း၊ ကွန်မန့်ကောင်း၊ အတွေးကောင်း၊
အငြင်းအခုံကောင်း (သဂျီးနဲ့) သူတစ်ယောက်…တစ်ရွာလုံးချစ်ကြပြီး တရီးထဲ ရီးနေ
ခဲ့ရတဲ့သူတစ်ယောက်…ခုတော့ ရွာကိုပစ်လို့ ဘင်သံညံတဲ့ ယင်ဂလန်ပျီဂျီးမှာ
ပျော်တော်မူနေတဲ့ ဟို ဂျီးဒေါ်ခင်လတ်ဆိုသူဂျီးကိုလည်း… သားသားသိပ်မုန်းတာပဲမေမေ
ခုတော့..ရွာပြန်လာတာကို ဝမ်းသာအားရ ကော်ဇောနီခင်းပြီး ကြိုဆိုပါတယ်ခီမျာ…
မုတ်ဆိတ်မွေးလေဒီပုံကလေး.. မူရင်းဝက်ဘ်ဆိုက်နေချိပ်ပြီး.. တင်လိုက်တယ်..
အို ဘာဖစ်ဖစ် လာပီးရော
အရီးလိုပဲ ပျောက်သွားတဲ့လူတွေအများကြီး ကျနော်အပါအဝင်ပေါ့…။ဒါပေမယ့်…သူကြီး ဓာတ်ရိုက် ဓာတ်ဆင်လုပ်ပြီး..တော့ ဒေါင်းမွေးနဲ့ ဂဇက်ကို ခနခန ရိုက်ရိုက်ခေါ်နေတာသတင်းကြားတော့ မလာလို့ကို မရတော့ဘူး။
လွမ်းခြင်းမှာ ပြန်ပြီး လွမ်းထားသူတွေရော၊ ဝင်ဖတ်သူတွေရော အားလုံးကို လွမ်းခဲ့ပါတယ်။
(ဟိ ဟိ – ကဘာ ဆရာမကြီး မြစာကလေး ကွ )
(1) lu lu – တောင်ကြီးသူလေးလို့ သိလိုက်တယ်။ တောင်ကြီးကို ချစ်ခဲ့ဘူးတာပေါ့။ တွေ့ရတာ ဝမ်းသာတယ်။
(2) ကဆာမိ – မေ့နိုင်ပါ့မလားရှင်။ ချစ်သူကို ဆိုမပြသ၍ အကြွေး မကျေဘူးမှတ်။
(3) ROssI – ဟိုလူကြီး ၂ယောက်အကြောင်း အတင်းမှာ အရီး လွဲချက်ကို ပြင်ပေးခဲ့ အင်ဇာဂီ ရဲ့ ထက်မြက်မှု ကို Impress ဖြစ်နေဆဲ။
(4) ကြောင်ဝတုတ်လေး – ပန်းသီး ကိုက်တိုင်း သတိရတယ်။ (သို့ပေသည့် ပန်းသီး သိပ်မစားဖြစ်ဘူး။ ဟိ)
(5) ကိုခ – ညဖက် ရင်ပူရင် လုပ်သင့်တာ ကို ညွန်းပေးပြီး ကထဲ က နည်းကောင်း ရပြီး ဟန်ကျနေသမို့ ကျေးဇူးအမြဲတင်တယ်။
(6) ကေဇီ – ဟင်းတွေဖြစ်သလို ချက်နေတိုင်း ထမင်းဆိုင်လေးကို ပြေးလာချင်တာ။ အမြဲသတိရတယ်။
(7) ဆက်ဆက် – ဘာတွေ ထူး ပြီလဲ။ အလင်းဆက် တစ်ယောက် ရွာ ထဲ ဟိုပြေးဒီပြေး ကူညီနေမှာလို့ အမြဲ ယုံနေတာပါ။
(8) ကိုနို – ပျောက်သူ ချင်း တူရင် ဘယ်သူ ပို ပျောက်လဲ ဟေ့။ ကိုနို အသံပြန်ဖတ် လိုက်ရတာ ဝမ်းသာပါတယ်ရှင်။
(9) မနန်း – တောင်ငူသူလေးရဲ့ စာရေး အသား ကောင်း လေးတွေ ကို လွမ်းပါတယ်။ အသံလေး ကြားနေရဆဲ မို့လဲ ပျော်သွားတယ်။
(10) ကိုကျောက် – အဟမ်း အဟမ်း – အင်တာဗျူးးမယ်။ အင်တာဗျူးးမယ်။ ဘွ ပြောင်းသွားပြီးပြီ ဆိုတော့ ဘယ် ဘွ ကို ပိုကြိုက်တုန်း။
ရွာထဲ မျှထားပြီးသားရှိလဲ Link ပေးပါဦး။
အရင်ပြောခဲ့သလို ကျုပ် တူမ လေးကို ဟင်းကောင်းချက်ကျွေးရဲ့လား။ အခု နှင်း က ဘယ်မှာလဲ။ သူ ပျော်ရဲ့လား။ ပျော်အောင် မထားလို့ ကတော့ နာပြီသာမှတ်။
(11) သဲနု – ကိုယ့်ညီအစ်မ တွေ ကို ဘယ်မေ့ပါ့ မလဲ။ စီဂျေ ခပ်ထက်ထက် မိန်းမ တစ်ယောက် ရှိတဲ့ ရွာ ကို ဘယ်ထားခဲ့ပါ့မလဲ။
(12) ဖိုးသိကြား – သင်္ကြန်တုန်းက သတိရနေပါ့။ နတ်သမီး တွေ နမော်နမဲ့ ကြားမှာ ကျုပ် တူလေးရဲ့ ခေါင်းများ အရောင်းစားခံရတော့မလားလား ပျောက်များသွားမလားလို့။
(13) ကိုပါ – ပါလေရာ ချင်းတူကြသမို့ ပါလေရာ ရှိရာမှာ ဒီ ပါလေရာလဲ ရှိနေမှာပါ တော်။ ဒါထက် ရှင်ရော အတော်အလုပ်ရှုပ်ခဲ့တယ် ထင်ရဲ့။
(14) ကကြောင် – နယူးယောက်မှာ နှင်း တွေ သတင်းကြားတော့ စိတ်ပူလိုက်သေး။ ဒီ ကြောင်တစ်ကောင်တော့ အမွေးတုန်းတော့ မှာဘဲလို့။ အခု အိမ်နားမှာ ရုပ်ဆိုးဆိုး အမွေးပွ ညစ်ကျယ်ကျယ် ကြောင်တစ်ကောင် ရှိနေတယ်။ အဲ့ကောင် ကို မြင်တိုင်း သတိရလိုက်တာ အရမ်းပါဘဲ တော်။
(15) မမ – ရေစက်ပါတယ် ပြောမလား။ ချစ်ညီမ တွေ ရှိတဲ့ အရပ် ကို အကြာကြီးခွဲမှမှ မနေနိုင်တာ၊
(16) လုံမ – ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ အားကိုးရတဲ့ ကလေးတွေ ရှိနေသမို့ ရွာ ကို စိတ်ချခဲ့ပေမဲ့ လွမ်းနေတာပါ။
(17) မောင်အံ – ဘယ်နှစ်ခါ ထိပ်ခေါက်ခံရပြီးပြီလဲ။ ဘယ်နှစ်ခါ စိတ်ကောက်ခံရပြီးပြီလဲ။ ဒီနေ့ Post ဘယ်ရောက်နေလဲ။ မလုပ်တော့ဘူးလား။ လုံမ နဲ့ တွဲပြီး အမြဲသတိရတယ်။
(18) အိမ်လွမ်းသူ – အိမ်လွမ်းသူချင်း စကားတွေ တူခဲ့သမို့ တကယ်ရင်းနှီးခဲ့ပါတယ်နော။ ဆုတောင်းလေးအတွက် ကျေးဇူးပါ။ အိမ်လွမ်းသူလဲ အလွမ်းတွေ ကနေ အပျော်တွေ အမြဲရနေပါစေ။
(19) အစ်မဒုံ – အင်တာနက် ပြန်ရချိန် လွမ်းချင်းစာပို့ လိုက်ကထဲ က ရွာထဲ ပြန်ဝင်ချင်တော့တာ။ မနဲ စိတ်ထိန်းခဲ့ရတာ။ မဟုတ်လို့ကတော့ တဗုန်းဗုန်း ဘဲ။
(20) ကထူးဆန်း – ကိုယ်ချင်းစာနိုင်ပြီလား စီဂျေကြီးရေ့။ ကိုသစ်၊ မောင်ပေ၊ မောင်ပေါက် တို့ကိုလဲ အခု ကိုယ်ချင်းစာနေနိုင်ပြီ။ ရှင်ကြီးရော အလုပ်အမြဲရှုပ်နေတာဟုတ်။
(21) မပြုံး ရေ့ – တို့ညီအစ်မ တွေ မငြင်းရတာ ကြာပေါ့။ အိုလာတာ ဓာတ်ကျတာ အမှန်ဘဲ။ ဒါနဲ့ဘဲ ကျက်သရေရှိရှိ အို အို သွားဖို့ကို လမ်းရှာနေတယ်။ ဒါနဲ့ သမီးလေး နဲ့ သားလေးရော၊ နေကောင်းကြလား။ စာအုပ်အသစ် ရေးနေလား။ မပြုံး ကတော့ ကိုယ်လုပ်ချင်တာ လုပ်နေနိုင်ပြီဖြစ်တာမို့ ကံကောင်းလှပါတယ်။
(22) kolumbus – မယုံမရှိနဲ့။ တီဗီမှာ around the world in 80 days ဆိုပြီး အစီအစဉ် တစ်ခု အလာမှာ အမေရိကားကို ဖြတ် တော့ ရွာသား kolumbus ကို သတိရသွားတာ။
(23) ကဘချော – ဘယ်သူပိုတယ်ဆိုတာ နောက်တစ်ခါဆုံရင် ပြိုင်ဖို့ သိမ်းထားပေးပါ။ မဒမ်ချောကိုလဲ သတိရကြောင်းလေး ပြောလိုက်ပါဦး။ အလုပ်ရှုပ်လား မမေးရက်ပါဘူး။
(24) ကကြီးမိုက် – ကျုပ်ရဲ့ စင်ဒရဲလား ကို ဘယ်ထားခဲ့ပါ့မလဲ။ ထားခဲ့မယ် ဆိုလဲ ရွာကို အရင်ဖျက်လိုက်မယ်။ ဟိဟိ။ ရေးထားတာလေး တင်ပါလေ။ မရပ်ပါနဲ့။
(25) Crystalline – အပေါ်မှာ ဟို၂ကောင် ပြောသလို ရက်နီးလာပြီ။ အသင်း ရွေးပြီးပြီလား။ အရီးက ဝင်ဘယ်ဒန် အသံကြားတိုင်း မကြည်စင် ကို သတိရတာ။
(26) သူကြီးမင်းရှင့် – ပုံ အတွက် ကျေးဇူးပါ။ အဲဒီအတွက် ရေးဖို့ ရွာထဲ ဝင်လာတာ။ မရေးဖြစ်သေး။
(27) ဝေါင်းလေး – အရီး က ရှက်ကျောပြတ်နေသမို့ တော်သေး။ ကလေးတို့ အားလုံးကို သတိရတယ်။
(28) ဂဂ – နွယ်ပင်လေးရော။ အင်တာဗျူးးလေးတွေရော ရွာထဲ ဆက်မျှနေသေးလား။
(29) ကပေါက်ကြီး – အိမ်ပြောင်းချိန် ပစ္စည်းတွေသိမ်းတော့ ရှေးတုန်းက ကက်ဆက်ခွေဟောင်း လေးတွေကြည့်ပြီး သီချင်းချစ်သူခြင်း မို့။ ကပေါက်ကြီး ကို သတိရနေတာ။ စာရေးကောင်းသူကြီးရဲ့ စာတွေ၊ ဒါ့ပုံ လေးတွေ လွမ်းနေတာပါ။
ဝေ ၊ pooch ၊ တီချယ်ကြီး၊ မအိ၊ မနို၊ ဆူး ၊ အစ်မအေးကေကေ၊ နှင်းနှင်း၊ ကစံလှကြီး၊ ပန်းချီဆရာခေါင်၊ ကိုအဘဖော၊ ဘပု၊ ကိုဆွေ၊ မောင်ဘလှိုင်၊ စွယ်တော်ရွက်၊ sorrow၊ မမှီ၊ မိုချို၊ ရွှေကြည်လေး၊ ပန်ပန်၊ Green Rose၊ အိတုန်၊ မောင်ကြေးအိုး ၊ မောင်မတ် – အမတ်မင်း၊ မောင်တိုက် – ရွှေတိုက်စိုး၊ ရွှေအိ၊ နွယ်ပင်၊ မနော၊ ရင်ငြိမ်းနွေး၊ လဲ့လဲ့ကြည်၊ ခိုင်ခိုင်၊ မွန်းခစ်၊ လကဗျာ၊ တောတွင်းပျော်၊ မိုးဇက်၊ တိမ်မည်း၊ သူပုန်ရဲစည်၊ တောပုန်းနိဂိမိ ဂဏန်းကောင်၊ ဇော်သန့်၊ ဇော်မင်း၊ ဘားမား၊ ကိုရင်စည်လေး၊ အမတ်မင်း၊ မှော်ဆရာ၊ ကိုသစ်၊ မောင်ပေါက်ဖော်၊ မောင်ပေ၊ အညာသား၊ အန်ကယ်ကြီး၊ ကိုအောင်၊ မိုဘိုင်း၊ garuda ၊ နေခြည်၊ ပန်းစံပါယ်၊ may flowers၊ အညာတမာ၊ အဘနီ၊ ကို Out Of ၊ ဆြာအုပ်၊ စုံထောက်ကြီး ရာမည၊ awra-cho၊ ကိုမျိုးသန့်၊ ကဘုန်းကျော်၊ ကိုပီချိုကြီး၊ မောင်လုလင်၊ ဆရာလေးကိုထွန်းဝင်းလတ်၊ ဒီပါကို၊ ကြည်ဆောင်း၊ ကိုနေးချား၊ ဦးဂျစ်၊ အောင်မိုးသူ၊ ကိုရင်မောင်၊ မောင်ရှုံး၊ သုဝေ။ ကိုဇောက်ထိုး။ မိုးမင်းသား၊ သူရဇော်။ လူဆိုးကြီး၊ အေးဝတီကြီး၊ ရွှေအိမ်စည်၊ ဆရာမိုးညို၊ ရင်နင့်အောင်၊ သူရဿဝါ, ၊ ရာဇဝင်လူဆိုး၊ Alpha Vanishing၊ ကိုထက်ဝေး၊ ကိုသော်ဇင်၊ မောင်နာဂရချစ်သူ၊ ကြေးမုံ ဂျီး၊ သုရှင်၊ ခပ်မိုက်မိုက် ကောင်မလေး ၊ ချစ်ရင်ထူး ၊ ကိုလင်းမြွှေ၊ ဖြိုး
အားလုံး ကို သတိရတယ်။ တစ်ချို့လဲ သူရို့ နာမည်တောင် သူတို့ မေ့နေလောက်ပြီလားမသိ။
နာမည် မပါရင်လဲ သတိမရလို့ မဟုတ်ပါ။ ဝင်ပြောပေးပါလား။
လူသစ်တွေ အားလုံးကိုလဲ နှုတ်ဆက်ပါတယ်။
အဓိက ခေါ်လာချင်တဲ့ မုတ်ဆိတ်လေဒီ ကိုလဲ ခေါ်မလာရသေး။
(ကပေါက်ကြီး – အိမ်ပြောင်းချိန် ပစ္စည်းတွေသိမ်းတော့ ရှေးတုန်းက ကက်ဆက်ခွေဟောင်း လေးတွေကြည့်ပြီး သီချင်းချစ်သူခြင်း မို့။ ကပေါက်ကြီး ကို သတိရနေတာ။ စာရေးကောင်းသူကြီးရဲ့ စာတွေ၊ ဒါ့ပုံ လေးတွေ လွမ်းနေတာပါ။)
ကို လတ် ကြီး
မ တွေ့ တာ ကြာ
လွမ်း တယ် ဗျာ လို့ တော့
စာ မ ဖွဲ့ တော့ ပါဘု
လာ ခဲ့ ရင် သာ အ သံ ပေး လိုက် ပါ
ပျင်း နေ ရင် နှစ် ယောက် သား ငြင်း
ရန် ဖြစ် တမ် းေ လး က စား ချင် လို့ ပါ
နာမည် စာရင်းတွေ ယူမယ်နော်။
အနော် စကက်ကျူးမှာ ကြည့်လိုက်နော်။
အရီးရဲ့ ကလောင်နာမည် ကိစ္စလေးလည်း ပြောပြဦးနော်။
အရီးကို ချစ်လို့ ပထမဆုံးနေရာ ချန်ထားတာ.
ပထမ နေရာ ဦးဖို့ ညနေပြန်ဝင်လာမယ် ကေဇီလေး။
ကလောင် နာမယ် မြစာကလေး က ဟို သူပုန် ရဲစည် စိန်ကြက်ဆင် ကို ပြိုင်ဖို့ ကြိုးစားလိုက်ရတာလေ။
နောက် ဒင်းက ပျောက်သွားရော။ :-)))))
အောင်မလေး ..သတိရတယ်ပေါ့လေ…..အရီးလေး..နာမည်တပ်ပြောခံရတော့လဲ …အဟိဟိ ..ဂုဏ်ယူပီတိဖြစ်လွန်းလို့ ..ဘယ်ချောင်ပြေးကပ်ရမှန်းမသိဖြစ်မိပါတယ်…
ထိပ်တော့ အခေါက်ခံရသေးဖူးဂျာ …
စိတ်တော့ ကောက်ခံရဖူးခဲ့ပြီ … ဟီးးဟီးးး
ဒီနေ့ပို့စ်က ချိဘာဒယ် …
ပွဲပီးလို့ ဖြုတ်ထားလိုက်ဒါဘာ ….
ဒီလကုန်မှ နောက်တစ်ခု ပြန်ကပ်မယ်လေ ….
အရီးကို တအား လွမ်းနေဒါ …
အရီးက ပစ်ထားရက်ဒယ်ဂျာ …
မုန့်ကျွေးမှ စိတ်ကောက်ပြေဒေါ့မယ် …
အခုတော့ မခေါ်တော့ဘူး …..
ဟီးး သင်္ကြန်မှာ နတ်သမီးတွေကို အနားပေးပြီး ကျနော်လဲ ဘဝ ခဏကူးခဲ့ပါတယ်ဗျ
နတ်သမီးတွေကြားထဲမှာ အခုထိ ဒီခေါင်း ယားနေဆဲပါဗျို့
အရီး သတိရတဲ့အထဲမှာ အညာသားဆိုတာ ကျွန်တော့်ကိုပြောတာလား။
အရီးကို သတိရတဲ့အထဲမှာပါပေမယ့် ရွာထဲမှာ အရီးကို မတွေ့တိုင်းလွမ်းမိပါတယ်။
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် UCC ခေတ်ကလား
ဒါဆိုရင် အရီးနဲ့ကျွန်တော် ခေတ်တူလောက်တယ်။
လွမ်းမိပေမဲ့ မဝင်ဖြစ်တာကြောင့် နုတ်မဆက်တာပါ
အခုတော့ မနေနိုင်တော့လို့ ဝင်မိပြန်ပြီ။
အရီးစောစောက ကိစ္စလေး ဟုတ်မဟုတ် . . .တစ်ချက်လောက်
ကိုရွှေညာသား – အညာသားနဲ့ ရွှေညာသား နဲနဲ ဘဲ လွဲသွားတာပါ။ :-)
ကျွန်မ မိခင်ကျောင်းက အီကိုပါ။
၁၉၉၀-၉၁ မှာ မာစတာပြန်တက် တော့ အိုင်တီဘာသာ အတွက် ယူစီစီ ကို တစ်ပါတ် ၂ရက် (မနက်ပိုင်း) တွေ သွားရပါတယ်။
COBOL, FORTRAN ပရိုဂရမ်တွေ Run ကြည့်ဖို့ အတွက်ပါ။
သီအိုရီ တွေ ကို ဆရာဦးမြသိန်း နဲ့ ဆရာမဒေါ်ဂေးမောလ် တို့ လာသင်ပါတယ်။
ကိုရွှေညာသား က UCC က ဆရာများလား။
အရီးလတ် ရေ ။
မနေ့ကမှ US & Canada ကနေပြန်ရောက်တယ် ။
ဒီနေ့မှ ရွာထဲ ပြန်ဝင်ဖတ်နေတာ ။
Comment ရေး နောက်ကျတာ ခွင့်လွှတ်ပါဗျာ ။
ကြိုဆိုပါတယ် အရီးလတ် ရေ ။
ဟိုး ရွာနဲ့ ဝေးတဲ့ ရက်တွေတုန်းက စိတ်ညစ်စရာတွေ ရှိလာတိုင်း “ကိုယ့်ကံကိုယုံတယ် ဆိုပြီး အဲဒီ စိတ်ညစ်စရာတွေ ကို အရသာခံ ကြည့်နေတတ်တယ်” ဆိုတဲ့ သူကို အမြဲသတိရနေပါကြောင်း။
ရဲ ရင် အစထုတ်လေ။ ငြင်းကြစို့။
ရှီး (မောင်ဂီ ကို ဘယ်နှစ်ခါ စိတ်ကောက်ပြီးပြီလဲ) ၊ ရေငါး (Water Fish) Water Polo :-)))
လွမ်းခြင်းကြီး ဖြုတ်လို့ ရပါပြီ။
မုတ်ဆိတ် ကို တော့ ရွာထဲကို သွင်းဖို့ အခုထိ အခါမပေးသေး။
ဟေးးးးးး တောင်ပိုင်းကလူတွေ အရီးပြန်လာပြီ လက်ဆောင်လာယူကြ
မောင်လေး..အဘ ကိုဆွေရဲ့ နောက်ကျ ကြိုဆိုမှု ကို..ခွင့်လွတ်ပါနော….
အရီး ရဲ့ အားပေးမှုကြောင့်..အင်္ဂလန်ကိုစွန့်ခွာပြီး..အမိမြေကိုပြန်ခဲ့ပါပြီ…
ပြန်လာခါနီးက လည်း အရီးကို နှုတ်မဆက်ခဲ့ရဘူး…
ရွာသားတွေနဲ့ တွေ့တဲ့ အခါတိုင်း ဟိုကမေး..သည်ကမေး နဲ့..အရီးမအားဖြစ်နေတဲ့ အကြောင်းပြောဖြစ်ပါတယ်..
အထူးသဖြင့် ကိုမိုက်က တချိန်လုံးကိုမေးနေတော့တာ..
အရီး ရဲ့ အသံကို ပြန်ကြားရလို့ အင်မတန် ဝမ်းသာမိပါတယ်..
အင်္ဂလန်မှာ မဆုံဖြစ်လိုက်ပေမယ့် ..တနေ့တော့ အရီးနဲ့ မဖြစ်မနေ ဆုံကြမယ်ဆိုတာ ယုံကြည် ထားရင်း
မောင်လေး အဘ ကိုဆွေ..
ဆင်းဆင်းဇားဇား လေးလည်း ပြောဘာအုံးဗျာ ..
အရီးရဲ့ အသံကို ပြန်ကြားရဒါဒုံးလို့ …
စာဘဲ မြင်ရဒဲ့ ဟာဂျီးကိုများ ….
အင်းလေ … စာရိုက်တုန်း ဘယ်ပုံတွေ ငေးနေမှန်းမှ မတိဒါဂို ….
ကိုဆွေ ရေ –
အခု တကယ်ဘဲ ပြန်လိုက်ပြီပေါ့။
Well Done ပါ ကိုဆွေ။
ရှေးရိုးလမ်းကို အသာလေး မကြိုက်ဘဲ မှေး မလိုက်ဘဲ ကိုယ်လိုရာ လမ်းသစ်ဖောက်လိုက်ရဲ တဲ့ ကိုဆွေ ကို မောင်တော် လိုက်ရတာ တကယ်ဘဲ ဂုဏ်ယူပါတယ်။
အခုထက်ပိုပြီး တိုး အောင်မြင်မှာလို့ အကြွင်းမဲ့ ယုံပါတယ်။
ဒါထက် – ဘိုလိုဖြစ်ပြီး “ကူမားရ်” သွားရတာလဲ။ :-)
လွမ်းနေတာ တစ်ကယ်ပါ …
သတိရသူ စာရင်းထဲ မအိ နံမယ်လေးတွေ့ရတော့လဲ
စာလေးတွေ ဖတ်ချင်လို့ မျှော်နေပါပြီနော်…